Celceliska Dhaqdhaqaaqa. Qeybta 2: hagaajinta iyo talooyinka | vfxAlert official blog
Celceliska Dhaqdhaqaaqa. Qeybta 2: hagaajinta iyo talooyinka
Akhriso qaybta koowaad ee sida astaamuhu ugu shaqeeyaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo celcelis ahaan celcelis ahaan dhaqaaqaya. Midda labaad waxaan hagaajineynaa natiijooyinka waxaanan ku siinaynaa talooyin ku saabsan ganacsiga.
Hagaajinta Celceliska Dhaqdhaqaaqa
Adeegsiga tikniyoolajiyadaha kombuyuutarka ee waxqabadka sarrifka ayaa suurta gelisay in la xisaabiyo algorithms isku dhafan oo loogu talagalay ugu horreyntii yareynta qiimaha dib u dhaca. Jilicsanaan dheeri ah ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu sii dheereeyo "sawaxanka" suuqa: laba jibaar (DEMA) iyo sedex laab (TEMA) celcelis ahaan dhaqaaq.
Farsamooyinka noocan oo kale ah waxay sameeyaan istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah xitaa xasaasi ah. Inbadan ayaa loo isticmaalaa ganacsatada dhexdhexaadka ah iyo kuwa muddada-dheer ah, marka ma tixgelin doonno iyaga si faahfaahsan. Aynu eegno saddex ikhtiyaar oo loogu talagalay hagaajinta jawaabta suuqa hadda jira:
Celceliska Dhaqdhaqaaqa Hull (HMA)
Qoraagu waa ganacsade reer Australia ah Alan Hull, oo soo jeediyay in la yareeyo dib u dhaca iyadoo la adeegsanayo halkii qiimaha dhabta ah ee muddada muddada xididkeedu laba jibbaaran yahay. Maaddaama celceliska saldhiggu noqon doono WMA, nidaamkeeda culeysku wuxuu ku darayaa saxsanaanta. Jaantusku wuxuu muujinayaa tusaale sida labada tilmaamuhu ula shaqeeyaan isla xilliyadaas. Sawirka ayaa tusaale u ah sida labada tilmaamuhu ula shaqeeyaan isla xilliyadaas.
Waxaad ku arki kartaa jaantuska HMA, isbeddelka isbeddelka waxaa lagu qeexay si ka cad heerka MA. Laakiin waxaa jira dhibaatooyin:
Natiijooyinka xisaabintu waxay ka sarreeyaan celceliska qiimaha qiimaha waxayna aad ugu dhow yihiin shaxanka ku jira waqtiyada yar yar, taas oo kordhinaysa tirada calaamadaha binary ee bilaashka ah. MA waa inaysan sidan u shaqeyn xitaa haddii wax walba ay ku wanaagsan yihiin xogta taariikheed - haddii ay jirto is-dhexgal aad u dhow "kordhinta tirada xilliyada;
Kaliya HMA looma isticmaali karo istiraatiijiyad ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaariyadeedkeesalaxeedkjareysa isgoyska labo celcelis ama celcelis dhaqaaq ah Xaaladdan oo kale, dib-u-dhiggu wuxuu ciyaaraa door wanaagsan - xilliyo kala duwan iyo noocyo isku celcelis ah ayaa u shaqeeya si la mid ah hababka falanqaynta dhowr waqti-go'an, tusaale ahaan, "Saddex Baaritaanno Oday". Haddii dib u dhac ugu yar ku yimaado dhammaan qalabka, tani waxay u horseedi doontaa xadgudub caqliga istiraatiijiyadda iyo calaamadaha beenta ah ee lama huraanka ah.
Celceliska Isbeddelka Is-bedbedelka Is-bedbedelka (VIDYA)
Dhammaan algorithms-yada caadiga ah waxay isticmaalaan qiime MA oo go'an oo jilicsanaanta dartiis u fududaanta xisaabinta gacanta. Suuqa saamiyada, tani way saxnayd sababtoo ah hoos udhaca hoos udhaca marka la barbardhigo Forex iyo muuqaalka dhiiri gelinta mararka qaarkood. Celceliskani ma tixgelinayo waxyaabaha gaarka u ah labada lamaane waxayna sii kordhineysaa dib u dhaca iyo tirada beenta bilaashka ah ee been abuurka ah . Celcelis ahaan isku-celcelis firfircoon sida tilmaanta VIDYA ayaa xallin kara dhibaatada.
Si loo qiimeeyo isbeddelka hadda jira, VIDYA waxaa ka mid ah Chande Momentum Oscillator (CMO) - saamiga wadarta guud ee kororka qiimaha togan iyo kan taban ee tiro cayiman oo cayiman. Isku-dheelitirnaanta buuxda ee tallaabada xigta ayaa lagu dabaqayaa EMA si loogu talagalay jilicsanaanta ugu dambeysa.
Inta badan maalinta ganacsiga, tilmaamuhu wuxuu si isku mid ah ugu socdaa EMA u dhiganta. Laakiin kudhow qiimaha waxaadna abuuri kartaa ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah leh dib-u-dhac yar. Sidoo kale, algorithm-ka xisaabinta CMO wuxuu si dhakhso leh ugu gudbayaa dhaqdhaqaaqa jiifka (fidsan) dhamaadka isbadalka. Waxaa jira wakhti lagu xiro booska, si loogu beddelo istiraatiijiyadda isbeddelka kanaalka, si looga baxo suuqa.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa La-qabsiga La-qabsiga Kaufman (KAMA)
Wax ka beddelka soo socda ayaa ah celceliska socodka EMA, halkaasoo cabbirka aasaasiga ah ee xisaabku uu noqonayo "isku-dheelitirnaanta waxtarka" si loo hagaajiyo heerka celceliska iyo la-qabsiga suuqa hadda jira. Markaad dhinac u dhaqaaqdo, shaxdu way ka xasaasi yar tahay (sida EMA oo leh xilliyo waaweyn). Markay isbeddel cusubi muuqdana, isugeyntu waxay bilaabmaysaa inay si firfircoon uga falceliso sidii "deg deg" EMA oo u siiso calaamado ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh .
Adaptive Kaufman waxaa loo sameeyay si loo xalliyo khilaaf weyn: dhinac dhinac ah, falcelin ku saabsan dareenka muddada gaaban, gaar ahaan ka dib markii la sii daayay warar aasaasi ah oo xoog leh, oo si been abuur ah loogu tarjumi karo isbeddel cusub. Dhinaca kale, la qaboojinta badan, waxaad waayi kartaa barta laga soo galo ee wanaagsan.
Markaad isticmaaleyso istaraatiijiyadaha dadka kale iyo gaar ahaan lataliyayaasha otomaatiga ah, ogow celceliska Dhaqdhaqaaqa. Tilmaamayaasha isbeddelka ayaa kaliya noqon doona bilowga falanqeyn dheeri ah, natiijada ugu dambeysa waxay kuxirantahay sida saxda ah ee ay u shaqeeyaan.
Waxaan marwalba raacnaa nidaamka maaraynta halista. Marka celceliska dhaqdhaqaaqa uu si firfircoon ugu socdo dhinaca macaashka, dadka bilowga ah waxay leeyihiin xamaasad iyo dhawr ikhtiyaar oo ikhtiyaari ah. Suuqa wuxuu had iyo jeer ku ciqaabaa "yididiilada" noocan oo kale ah dib u noqosho fiiqan ka hor inta wadarta guud ee luminta deebaajiga;
Tilmaamuhu wuxuu shaqeeyaa oo keliya marka uu jiro isbeddel. Dhaqdhaqaaqa dambe, calaamadaha binary ee bilaashka ah ayaa been badan, laakiin xitaa xilliyadaas oo kale, MA ayaa faa'iido leh. A "corridor" oo ah labada celcelis celceliska dhaqdhaqaaqa ayaa hoosta ka xariiqaya aalado badan oo faa'iido leh, sida Kooxda Bollinger iyo qalab kale oo kanaal ah (Envelopes, Keltner, iwm).
Dhammaan noocyada MA waa kuwo aan degganeyn waqtiyada hoose, sidaas darteed xoqidda, waxaa fiican in la doorto xal kale, sida xad-dhaafka / xad-dhaafka oscillators, heerarka sicirka kala duwan (Pivot Point, Murray iyo kuwa kale) oo lagu daray shilinta iyo xogta mugga suuqa.
Sida dhammaan qalabka falanqaynta farsamada, Celceliska Dhaqdhaqaaqa ma qiimeynayo xogta falanqaynta muuqaalka iyo guud ahaan xaaladda suuqa. Kaliya waxay ku shaqeysaa qiimayaashii muddooyinkii hore mana bixin karaan 100% saadaal sax ah!
Waxay raacdaa inaadan ku habeyn karin tilmaame jaantuska qiimaha oo kaliya ku saleysan xogta taariikhiga ah. Ma raadin kartid meelaha laga soo galo meesha aysan jirin, adiga oo dooranaya muddo gaaban isla markaana ka furaya isgoys kasta;
Ha ku istcimaalin hal tilmaame istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah . MA had iyo jeer way daaheysaa, xitaa haddii ay tahay HMA-had iyo jeer raadso xaqiijin dheeraad ah ama calaamadda hoggaamineed ee oscillators sida kala-duwanaanta.
Tilmaamuhu waa in lagu xaqiijiyaa aaladaha falanqeeya suuqa iyadoo la raacayo mabaadi'da kale. Sidaa darteed, MACD ama TRIX oo lagu dhisay aasaaskeeda si gaar ah waxtar uma yeelan doono - waxay la jaan qaadayaan celceliska aasaasiga ah, xitaa iyadoo dib u dhac kale uu jiro. Waxaa lagugula talinayaa inaad la socoto dhaqdhaqaaqa isbeddelada ee mugga iyo dheelitirka xoogagga Bull Power / Bear Power.
Aan soo koobno . Fahmitaanka sababta calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah u shaqeynayaan , waxaan marwalba xusuusannaa celceliska dhaqdhaqaaqa. Waxay noqon doonaan kuwo khuseeya muddo dheer, in kasta oo ay sii kordhayso xukunka ee ganacsiga HFT-ga soo noqnoqda. MA waxay siisaa faa'iido xasiloon oo leh deebaaji iyo heer tababar ah, waxaa kaliya muhiim ah in la raaco xeerarka oo aan la iloobin maareynta lacagta.